Madaxweyne Donald Trump oo maanta si diiran loogu soo dhaweeyay dalka Sucuudiga (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Donald Trump oo maanta si diiran loogu soo dhaweeyay dalka Sucuudiga (SAWIRO)
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa booqashadiisii ugu horeeysay tan iyo markii xilka loo doortay maanta ku tagey dalka Boqortooyada Sucuudi Carabiya, isagoona halkaasi si diiran loogu soo dhaweeyay.
Donald Trump iyo xaaskiisa Melania Trump ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Riyaad kusoo dhaweeyay Boqorka dalka Sucuudiga Salman Bin Cabdicasiis, waxayna labadaasi mas’uul is-dhaafsadeen salaan.
Donald Trump ayaa sheegay inay sharaf u tahay inuu soo booqdo dalka Sucuudiga, iyadoona lagu wado in Trump uu ka qeyb galo shirka madaxda dowladaha Islaamka iyo Mareykanka ee ka dhacaaya magaalada Riyaad.
Shirkaasi ayaa ah mid looga hadli doonno arrimo badan oo ay ka mid yihiin xiriirka wada-shaqeyneed ee ka dhaxeeysa dalalka Islaamka iyo Mareykanka iyo sidoo kale arrimo la xiriira la dagaalanka argagixisada.
Madaxweyne Trump ayaa markii uu soo gaba-gabeeyo safarkisa Sucuudiga, wuxuu safaro kala duwan ku kala tagi doonnaa Israa’iil, dhulka Falastiiniyiinta, Brussels, Vaticanka iyo Sicily.
Waa markii ugu horeeysay uu madaxweyne Trump safar ku tago dal Muslim, tan iyo markii xilka loo doortay.